haalota dubbiihiikaa Chaayinaa gulaali.
Galfata hiikaa galmee hiikaa jechootaa irraa haaquuf ykn ida'uuf, gulaaluuf qaaqa kana fayyadamuu ni dandeessa. Maqaa xurree faayilii hiikama galmee hiikaa jechoota fayyadamaa/kitaaba jechaa, haloota dubbii waliin.ctd dha. Gafata durtii faayilii kana keessaa haquu hin dandeessu.
Duudhaa chaayinaa gara Salphata Chaayinaatti
Duudhaa chaayinaa gara Salphina Chaayinaatti hiika.
Salphaa Chaayinaa salphate gara duudhaa Chaayinaatti
Salphaa Chaayinaa salphate gara duudhaa Chaayinaatti.
Kaasuu kaartaa Falleessuu
Kallatti maappessuu faalaa gara tarree tookkon tokkoo fooyyeessuu galchituutti ofumaan ida'a.
Barruu haala dubbii maappessuu barbaadde galchi.
Barruu Haala dubbiittiin bakka busuu barabaadde galchi.
Ramaddii haala dubbii filatamee hiika.
Haala dubbii hiikama galmee hiikaa jechootaa ida'a. Yoo haalli dubbii duraanumaa galmee hiikaa jechootaa keessaa jiraatee, haalli dubbii haaraan dursa fudhata.
Galfata fooyya'e gara faayilii kuusaa deetaatti olkaa'a.
Galfata hiikaa fayyadamaa filatame galmee hiikaa jechoota irraa filatame haqa.
Title is: Galmee hiikaa jechootaa Gulaali